[Latin Igama] Huperzia serratum [Umthombo] Huperziceae lonke imbiza kusuka China [Ukubukeka] Brown mhlophe [Isithako] Huperzine A [Ukucaciswa] Huperzine A 1% - 5%, HPLC [solubility] encibilikayo e-chloroform, methanol, ethanol, kancane oncibilikayo emanzini [usayizi Particle] 80 Mesh [Ukulahlekelwa ku omiswe] ≤5.0% [Heavy Metal] ≤10PPM [zezibulala-zinambuzane] EC396-2005, USP 34, EP 8,0, FDA [Isitoreji] Isitolo endaweni epholile & ezomile, kubalekeleni ukukhanya eqondile ukushisa. [Impilo] 24 Izinyanga [Iphakheji] Phama ...
[Latin Igama] Huperzia serratum
[Umthombo] Huperziceae lonke imbiza kusuka China
[Ukubukeka] Brown mhlophe
[Isithako] Huperzine A
[Ukucaciswa]Huperzine A 1% - 5%, HPLC
[Solubility] encibilikayo e-chloroform, methanol, ethanol, kancane oncibilikayo emanzini
[Kuyini Huperzine A]
Huperzia uhlobo moss bukhule e-China. Kuyinto okuhlobene club wona (umndeni Lycopodiaceae) futhi ezinye izazi zezitshalo zaqala ukusola njengoba Lycopodium serratum ezaziwayo. Lonke moss ukulungele yasetshenziselwa ngokwesiko. amalungiselelo Modern herbal ukusebenzisa kuphela alkaloid angawodwa eyaziwa ngokuthi huperzine A. Huperzine A kuyinto alkaloid ezitholakala huperzia ukuthi kubikiwe ukuvimbela ukuwohloka acetylcholine, nemiyo ezibalulekile ezidingwa isimiso sezinzwa ukudlulisa ulwazi kusuka kwiseli uye kwenye. ucwaningo Animal uveza ukuthi ikhono huperzine A lokulondoloza acetylcholine ingase ibe mikhulu kunaleyo ezinye izidakamizwa kadokotela. Ukulahlekelwa acetylcholine umsebenzi isici esiyinhloko kuphazamiseka eziningana ekusebenzeni kobuchopho, kuhlanganise isifo i-Alzheimer. Huperzine A kungase inanethonya zokuzivikela ku izicubu ubuchopho, eminye okwandisa amandla ayo theory ngokusiza banciphise izimpawu eziwumphumela wokugula kwezinye sokuphazamiseka okuthile ebuchosheni.
[Umsebenzi] Usebenzise ekwelapheni ngamakhambi, huperzine A Kuye kwatholakala ukuthi abe inhibitor cholinesterase, uhlobo imithi zokunqanda ukuwohloka acetylcholine (a ebalulekile yamakhemikhali ukuze akhe ukufunda nenkumbulo).
Akukhona nje esetshenziswa njengendlela yokwelapha i-Alzheimer, huperzine A futhi kuthiwa ukuthuthukisa ukufunda nenkumbulo futhi ukuvikela ezihlobene nokukhula ukwehla yobuchopho.
Ngaphezu kwalokho, huperzine A ngezinye izikhathi lisetshenziselwa ukubonisa lokuthuthukisa amandla, ukwandisa kokuqapha, futhi busize ekwelapheni myasthenia gravis (kwemikhuba sokuhlasela kwamasosha omzimba esithinta imisipha).
Previous: Green tea akhiphe
Okulandelayo: Kava extract
ESiberia Ginseng extract
© Copyright - 2016-2017: Wonke Amalungelo Agodliwe. - Amandla by Globalso.com